Ibrahimovic fii Pogban tapha Newcastle waliin tahu irratti nii hirmaatu - Gaachana Sabaa
November 18, 2017 November 19, 2017 Gaachana SabaaJose Mourinho, Man Utd, Paul Pogba, Sport, Zlatan Ibrahimovic
Taphattootni Manchester United lamaan Ibrahimovic fii Pogba’n tahpa sambata har’aa Newcastle waliin tahu, Old Trafford tti akka hiriiran Mourinhon beeksiseera.
Ibrahimovic ebla darbe jilba isaa miidhamuun hanga ammaatti osoo taphatin dirreen ala yoo turu,Pogba ‘n ammoo fulbaana keessa tapha Basel irratti morgaa miidhamuu dhaan hanga ammatti innis hanga ammaatti osoo hin taphatin tureera.
Ibrahimovic taphataa umrii waggaa 36 yoo tahu bara darbe Manchester United’f goolii 28 tapha 46 keessatti isaanif galchuun gara dhumaa irratti miidhame taa’e.
Ittisa United kan tahe Marcos Rojo’n illee tapha kanaaf akka argamu Mourinhon dubbatanii taphattoonni sadanuu akka taphichaaf akka hirmaatan illee ibsaniiru.
Rojon 27, tapha Liigii Awroppaa Anderlecht waliin godhame irratti akkuma Ibrahimovic miidhamuudhaan kan hafe dhaa.
Mourinhon yeroo darbe tapha hedduu taphattoota kanaa waliin taphannu illee gareen kun isaan malees as gaheera,isaan malee taphachuu dandeenyerraa garuu tapha keenyarratti humna addaa nuuf dabalu.
Ibrahimovic Waxabajjii keessa waliigalteen Manchester United waliin qabu waan dhumeef gadhiifamu illee Hagaya keessa ammoo waliigaltee waggaa tokkootiin isa badhaasan.
Lukaku fii Ibrahimovic humna cimaa tahu jedhamee eegama.
Lukakun Everton irraa £75m, kan bitame yoo tahu Manchester Unitedif galii 7 tapha Premier League 11 keessatti galchuu danda’eera.Haatahuu malee Lukakun tapha guguddaa irratti garaagaruummaa addaa sana mul’isuu hin dandeenye. Mourinhon,waliin taphachuu nii danda’uu jedha.
Taphattoonni ciccimoon waliin taphachuu danda’u.Ibrahimovic tapha daqiiqaa sagaltamaa guutuu taphachuu hin danda’u hanga guutuu guutuutti jabaatutti.Yeroo isa barbaachisa deebihee akka duratti taphachuudhaaf.
← Prezident Mugaben humna waraanaan to’atamanii jiru.
Pogba ‘n miidhaarra akkuma deebiheen galchii galmessise →